I-urticaria engapheli yokuzikhethela - Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Ne-Allergy & Airways
Ikhaya>Amafomu e-Urticaria>I-urticaria engapheli
I-urticaria engapheliIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-03T10:39:35+01:00
Uma izimpawu ze-urticarial-redness, hives, kanye ne-itching-zihlala isikhathi eside kunamasonto ayisithupha, ibizwa ngokuthi i-urticaria engapheli. Ukungakhululeki kungaqhubeka izinyanga noma iminyaka eminingana, kwesinye isikhathi kuze kuphele amashumi eminyaka. I-Angioedema nayo ingavela, ikakhulukazi endaweni yobuso noma ezandleni nasezinyaweni, nasendaweni yobulili. Manje yisikhathi sokuphenya izimbangela ngokucophelela, futhi kulokhu uxhumano nodokotela nesiguli akudingeki babambelele ngokwezibalo emikhawulweni yamasonto ayisithupha. Akuncikile ebucayi bokungakhululeki.
Ukungahambi kahle kwe-Urticarial njalo kubangelwa ukwenziwa kwamangqamuzana ama-mast. Ngakho-ke, ukungakhululeki kungenzeka noma kuphi emzimbeni lapho kukhona khona amaseli amakhulu. Amaseli omzimba atholakala ikakhulukazi esikhunjeni nasezikhungweni zomlomo zomgudu wokuphefumula nowesisu. Ukusebenza kwamangqamuzana omzimba ezinhlakeni zomgudu wokuphefumula kungaholela ku-dysphagia ne-dyspnea, ngenkathi ukwenziwa kwamangqamuzana omgogodla emathunjini kungadala ubuhlungu besisu, isicanucanu kanye nohudo. Iziguli eziningi futhi zibika ukungahambi kahle, ukukhathala, ikhanda elibuhlungu, kanye nobuhlungu obuhlangene obungavela ngesikhathi sokuhlaselwa kwe-urticaria.
Phakathi kwezimbangela ezikhonjisiwe ze-urticaria engapheli, ngokuhambisana nokuthi ama-hives / angioedema angenzeka nsuku zonke, masonto onke, noma ngaphansi kaningi, izifo ezithathelwanayo noma izinqubo zokuvuvukala (njenge-Helicobacter pylori), ukungahambisani nokuzwela kokudla kokudla, izithasiselo zokudla , nezidakamizwa (i-pseudo-allergies) nokusebenza okuzenzakalelayo kufaka phakathi ukusabela okuzenzakalelayo (ukusabela okubangelwa ama-autoantibodies). Lokho wukuthi, amasosha omzimba ahlinzeka ngama-antibody (ama-immunoglobulin) alwa namaprotheni awo. Lawa ahlaselwa ngama-antibody avikelayo sengathi la ma-antibody abhekene nabangenayo abayingozi njengamagciwane. Umzimba, njengokungathi, uyalwa ngokwawo. Ngakho-ke, sibiza amasosha omzimba anjalo okuzivikela ngokumelene nama-autoantibodies "ngokwakho".
Ukuseshwa kwe-trigger (noma okubangela) kuvame ukuba ngumseshi. Ukuqedwa kwembangela eyisisekelo kufanele kube yinjongo yokwelashwa kwe-urticaria engapheli. Endabeni yokutheleleka kwe-urticaria, khona-ke, ukutheleleka kufanele kuqedwe, futhi esimweni sokungabekezelelani izinto ezinciphisa urticaria kufanele kugwenywe. Uma leyo ndlela yokwelashwa ingenzeki noma ingaphumeleli, kusetshenziswa ukwelashwa okuyisibonakaliso (bheka isithombe seTherapy esigabeni iTherapy of Urticaria).
Indlela ye-pragmatic ngakho-ke ukugcina idayari yezimpawu nokubuka eduze: Amavili / angioedema avela kuphi? Isikhathi sini sosuku? Mayelana nemisebenzi ethile, njengalapho ugeza noma ngesikhathi sokuhamba ebusika? Ngabe kukhona ukuxhumana nesikhathi somsebenzi nesikhathi sokungcebeleka noma nokudla okuthile, imisebenzi ethile, ukuzilibazisa noma izifo?
Lapho kusolwa khona ukudla noma izithasiselo zokudla njengembangela, indlela yokuqeda amasonto amathathu ingasiza. Umuntu angaqala, ngokwesibonelo, ngamanzi ompompi, itiye elimnyama, ama-rusks bese eqhubeka namazambane nelayisi njll.: Uma izimpawu zinyamalala ngalesi sikhathi, ukudla okusha kungeniswa kancane kancane kuze kube yilapho umuntu ehlangabezana nalokho okubangela ukuhlaselwa kwe-urticaria.
Sisebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi sikunikeza okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kuwebhusayithi yethu. Uma uqhubeka nokusebenzisa le sayithi sizocabanga ukuthi uyavuma.OkInqubomgomo yobumfihlo